Gameplay Ndekọ na mgbe ahụ na-ebugote ọdịnaya ka iche iche na saịtị bụ a onu na ekwe ndị mmadụ maka a mgbe now na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na omume na-ebudatara. Ọ ga-bụghị naanị ime ka Ndekọ egwu ma ga-ekwe ka onye ọrụ iji jide n'aka na mmetụta na-agbakwunyere n'ime iji jide n'aka na ndị kasị mma na ndị kasị elu usoro na-etinyere idekọ gameplay. The nkuzi bụ ihe niile banyere ihe kasị mma egwuregwu play omume na metụtara Atụmatụ ndị a ga-etinyere ya.
Esi ihe ziri ezi?
Top 5 Atụmatụ banyere gameplay edekọ
Ọzọ dị ike ngwọta maka ndekọ ihuenyo na video
Ọ bụ otu n'ime ndị na echiche na emewo ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma mere na-enweghị ihe ọ bụla nke na akụkụ bụ isi a ga-atụle nke a bụ eziokwu na onye ọrụ nyochaa nakwa dị ka usoro ihe omume fim bụ a ga-atụle tupu ndị kasị mma e zụtara ma ọ bụ ebudatara for free. Na ma bụrụ na àgwà nke usoro ihe omume niile bụ ihe metụtara na maka otu ihe ahụ ọ bụ a ga-atụle tupu ọrụ e mere. Ọ ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma pụta na egwu na ala nke nkà ndị na-ahụ na-elekọta ma na na hassle free ụzọ.
The ihe ndị ọzọ na-agụnye na-arụ ọrụ nke usoro ihe omume na mkpokọta okirikiri nhọrọ ukwuu. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na okirikiri nhọrọ ukwuu bụ ihe bụ nke na-n'aka na a onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nbudata ọnụ ọgụgụ nke a na omume nke nwere a dị mfe interface dị elu karịa onye ahụ nke nwere a siri ike interface na abụghị ọrụ enyi na enyi. Ọ bụ ya mere gwara iji jide n'aka na onye ọrụ kwesịrị ịtụle ihe ndị na-na-kwuru na akụkụ a iji jide n'aka na ihe ga-esi bụ mma niile ugboro.
Na-esonụ bụ n'elu 5 Atụmatụ nke bụ a ga-atụle iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi mgbe eji gameplay software usoro dị ka ndị a ga-eme ka n'aka na ojiji bụ ezigbo niile ugboro:
1. The mmepụta ụzọ na format
Onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na mmepụta ụzọ họrọ na-eme otú ahụ na nhọrọ nke usoro ihe omume na-ịchọgharịrị na ya. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na ọ bụ banyere dị ka mmepụta faịlụ pụrụ ịchọta na ala na afọ ojuju. Ọ ga-ekwe ka onye ọrụ iji jide n'aka na faịlụ nke nwere na-uploaded na-achọta na ala na afọ ojuju. The ọma ọfiọkde onu na nke a ga-ekwe ka onye ọrụ iji na-enweta nsonaazụ kacha mma nakwa idetuo faịlụ na ọnọdụ ọzọ iji nyefee ha ka ha ndị ọzọ ọrụ.
2. The screenshots
N'okpuru a ngalaba onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na screenshots na-agbakwunyere ma na-nwekwara uploaded na ala na afọ ojuju. Ọ ga-ekwe ka onye ọrụ iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe results na-enwetara na usoro na dị na akara na onye ọrụ chọrọ họrọ. Ọ ga-ekwe ka onye ọrụ iji jide n'aka na usoro-ewere nta ohere na-ahọrọ:
3. ụba kwa abụọ ntọala
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma atụmatụ na e agbakwunyere n'ime gameplay software na maka otu ihe ahụ ọ na-eme n'aka na onye ọrụ detụrụ okpokolo agba kwa abụọ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na usoro ihe omume a na-anwale tupu anụmanụ na-agba ọsọ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe mmepụta ozugbo usoro ihe omume a họọrọ iji jide n'aka na ọ na-eme dị ka isi na-edekọ n'ihi na onye ọrụ.
4. The nkiri mkpebi
N'ihi na elu mkpebi na ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ihe nkiri mkpebi ka atọrọ ka a uru nke dị ka kwa onye ọrụ bụ ihe kasị mma na nke Steti pixel mkpebi. Ọ ga-ekwe ka onye ọrụ nwere udo nke uche na ihe kasị mma a họọrọ na ga-ekwe ka iji jide n'aka na ihe nkiri, nke e derela dị na akara na ihe ndị a chọrọ nke ọrụ.
5. Ihe dị iche iche ọrụ
Ndị ọzọ ọrụ na e agbakwunyere na ihe omume na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na ya pụta bụkwa otu nke kasị mma niile ugboro. Ọ na-agụnye hotkeys na push ịkọrọ atụmatụ. Atụmatụ ndị a ga-ekwe ka onye ọrụ na-eme ka n'aka na ezigbo ojiji nke usoro e mere na-enweghị imefusị oge na mgbalị.
Wondershare Video Convertor Ultimate na Video edekọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ọma software mepụtara nke oge a afọ. Ọ ga-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe video edekọ na-adịghị achọ mpụga download na arụnyere na usoro ihe omume. Ọ ga-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi edezi, nkwanye nakwa dị ka nbudata nke video site na nke a otu usoro ihe omume nke na-eme ya otu n'ime mma niile ugboro. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ihe omume ahụ ebudatara ma wụnye si URL http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html ina-arụ ọrụ mere.
Top àgwà nke Wondershare Video Convertor Ultimate
Na-esonụ bụ n'elu ise ọcha nke ga-rata onye ọrụ n'ime na nbudata na wụnye omume:
Site trimming ka agbakwunye ndepụta okwu usoro ihe omume dị otu nke kasị mma iji na-enweta results na-na akara na ihe ndị a chọrọ nke ọrụ.
Usoro ihe omume adịghị achọ ka a kwa ọnwa ugwo onye ọrụ dị nnọọ mkpa ijide n'aka na na onetime ugwo e mere na ikike na-enwe maka ndụ.
HEVC, 4K na HD conversions na-akwado site na usoro ihe omume na maka otu ihe ahụ ọ na-ahuta dị ka otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe omume na-akwado ndị ọhụrụ teknụzụ.
Site na iji nke a usoro a onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe mmemme na-mere na ala na afọ ojuju. The DVD convertor agbakwunyere na-agbakwụnye na uru nke usoro ihe omume oge ọ bụla ọ na-eji.
The video nchịkọta akụkọ nke e agbakwunyere na ihe omume na-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge na edezi a mere na akara na chọrọ.
> Resource> Game> Top 5 Atụmatụ gị mkpa maara banyere gameplay edekọ